हामी रमिता हेरेर बस्दैनौ,सरकार फेर्छौ : खनाल बरिष्ठ नेता नेकपा
कृष्ण गिरी बुधवार, मंसिर २६, २०७५, ०९:१०:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल कम्यनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वैचारीक नेताको रुपमा मानिन्छन् । पूर्व एमालेमा दुई पटक महासचिव र एक कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष पनि बनिसकेका हुन् ।
मदन भण्डारीले जनताको बहुदलिय जनवादको कार्यक्रम ल्याउँदा सबै भन्दा चर्को आलोचना पनि खनालले नै गरेका थिए । खनाल नौलो जनवादका पक्षधर थिए । तीनै खनाल विस्तारै जबज मान्ने मात्र होइन । पार्टी अध्यक्ष नै बने ।
तर करिब ७ महिना पहिला भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता पछि जुन स्प्रिट साथ एकता हुनु पर्ने थियो त्यो स्प्रिटमा भएको छैन । अझ पुरा एकता नहुँदै सचिवालयमा नै गुटबन्दी सुरु भएको छ । एकताको सुरुबाट नै नीति नियम विपरित काम गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कडा आलोचना गर्न सुरु गरेका खनालसंग पछिल्लो समयमा सचिवालयमा मात्र ३ जना सदस्य अरु थपिएका छन् ।
यहि सेरोफेरोमा रहेर नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसंग जनतापाटीका कृष्ण गिरीले कुराकानी गरेका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको यति लामो समय भयो । सुरुमा नेता कार्यकर्तामा जुन खालको उत्साह उमङग थियो त्यो विस्तारै निरासामा बदलिएको आभास हुन थालेको हो ?
यो पार्टी एकता ऐतिहासिक एकता हो । सम्पूर्ण जनता ,पार्टी नेता, कार्यकर्ता र समर्थकको चाहना अनुसार भएको हो । एकता हुँदा उत्साह उमङगको विषय बन्यो । देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि उत्साह आयो । सबैले समर्थन गरे ।
जसरी एकताले उत्साह उमंग आएको थियो, त्यो कुरा नेताहरुले कायम राख्न सकेन । एकताको कार्यदिशा ठिक ढंगले लागु गर्न सक्नु भएन नेताहरुले । दुई पार्टीबीचएकता भयो । केन्द्रीय समिति बन्यो । कार्यदिशा मात्र होइन, एकता प्रक्रियापनि सहि तरिकाले लागु गर्न सक्नु भएन । एकताको प्रोसेस एक ठाउँबाट सुरु हुन्छ र अर्को ठाउँमा टुङ्गीन्छ । तर यसलाई लागु गर्न चाहनु भएन । एकता पुरा नभएपछि टुङ्गीने कुरा भएन ।
केन्द्रीय समिति बनेपछि तल्ला समितिहरु भंग गरीए । जसको आवश्यकता थिएन ।दुबै पार्टीलाई त्यहि रुपमा राखेर विस्तारै एकता गर्न सकिन्थ्यो । तर तलका समिति भंग गर्ने काम मात्र भयो ।यदि तल्ला समिति भंग नै गर्नु थियो भने तीन महिनामा ती समितिको एकता गर्नु पथ्र्यो । अहिले सम्मम निमार्ण भएन । ७ –८ लाख पार्टी सदस्य काम बिहिन छन् । पार्टी तल निर्जिब भयो ।
टुप्पीमा हल्ली रहेको छ । पार्टीका तल्ला समितिको एकताको मापदण्ड बनाएर छिटो एकता गर्नु पथ्र्यो । तर तरिका विधि नै नबनाएर तलका समिति भंग गरिए । अहिले निरासा छाएको छ । यो निरासालाई चिर्न छिटो भन्दा छिटो स्थायी समिति ,केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु पर्छ । यसको लागि हामीहरु भनिरहेका छौ । हामीले त अझ पटक पटक भन्यौ । यसलाई छिटो गति दिउँ ।
पार्टीलाई गति दिएनौ भने के हुन्छ । निराशा , अन्यौलता त आउछ । अहिले पार्टी र सरकारकोे समिक्षा गर्नु पर्छ भनिरहेका छौ । एकता भएको यति लामोसमय भयो । सहि वैचारीक कार्यदिशा अपनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । पार्टी एकताको पक्रिया टङग्याउनु पर्छ । सहि कार्यदिशा पहिलाउन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।
माक्र्सवाद ,लेनिनवादको दृष्ट्रिकोणबाट हेर्दा नेकपालाई कस्तो देख्नु हुन्छ ?
पार्टीको निश्चित कार्यदिशा हुन्छन । ती हुन वैचारीक ,राजनितिक, सैद्धान्तिक, नितिका आधारमा संचालन हुन्छ । वैचारीक कार्यदिशा हुन्छ । सांगठनिक कार्यदिशा हुन्छ । राजनीतिक र सैद्धान्तिक कार्यदिशा हुनु पर्छ । नेकपा पनि यहि कार्यदिशामा छ । नेकपाले माक्र्सवाद र लेनिनवाद मान्छ ।
द्धन्द्धात्मक भौतिकवाद वैचारीक आधार हो । अहिलेपनि साम्राज्यावादका विरुद्ध लड्न कटिबद्ध छ । संगठनात्मक रुपमा लेनिनवादी आधारमा संचालन गर्छ । हामीले यी सबै कुरा मानेर पार्टी एकता गरेका हौ । हामीले पार्टी एकता हुदा एउटा दस्तावेज बनाएका थियौ । अथवा घोषणापत्र बनाएका थियौ । तर अहिलेसम्म प्रकाशन भएको छैन ।
अहिलेसम्म हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरुले कुन आधारमा दुई पार्टी एकता भएको हो भनेर बोल्न पाइरहेका छैनन । पार्टी एकताको आधार पत्र प्रकाशन नहुनु ठिक होइन । अहिले पार्टी दिशा हिन भएको छ । सम्पूर्ण पार्टीलाई नै थाह छैन कि कुन कुन आधारमा एकता भएको हो भनेर ।
जस्तो कार्यदिशाको आधारमा पार्टी संचालन गर्नु पर्ने हो त्यो भएन । जब हामी विचारमा सिद्धान्तमा एक हुन्छौ तब न साम्राज्यवाद,पूँजीवादका विरुद्ध लड्न सक्छौ । तर जसरी यो पार्टी संचालन हुनु पथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।
पार्टी विधि विधानमा तौर तरिकामा नचल्नुको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षको मात्र हो कि सचिवालय सदस्यहरुको पनि हो ?
यसको जिम्मेवारी सबैको हो । मेरो पनि हो । तर विशेष जिम्मा पार्टी अध्यक्षको नै हो । जुन अध्यक्षले पार्टी संचालन गरीरहनु भएको छ उहाँले नै जिम्मेवारी लिनु पर्छ अरुले लिएर हुँदैन । कम्युनिष्ट पार्टी संचालन हुने त सामुहिक नेतृत्वमा हो । तर यहाँ यो कुनै भएको छैन । सामुहि नेतृत्वको प्रणाली छैन ।
पार्टी समितिका बैठक बस्दैनन । स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको नै छैन । पोलिटब्युरो गठन नै भएको छैन । स्थायी समितिको बैठकको माग गर्दा गर्दा पनि भएन । जब हामीले सचिवालयको बैठक बहिस्कार गर्र्यो त्यसपछि बहुमतले स्थायी समितिको बैठक यहि २९ गते बोलाएको छ । यो पनि हाम्रो कारणले मात्र बोलाएको हो ।
तपाईले भनिहाल्नु भयो सचिवालयको बैठक बहिस्कारको कुरा, यो योजनाबद्ध हो कि त्यहि तत्काल बनेका योजना हो ?
हामी त बैठक बस्न गएका हौ । हामी त योजनामाथि छलफल गरौला भनेर गएका हौ । कुनै पनि सदस्य बैठक बहिस्कार गर्न होइन बैठक बस्न जान्छ । एजेण्डामाथि छलफल गर्न गएका हौं ।बैठक बहिस्कार गर्नेपूर्व योजना थिएन । त्यहि गएपछि त्यो पनि बैठक बस्ने सुर सार नभएपछि हो ।
पहिला पनि ३ बजे बैठक बस्ने भन्यो ४ बजेसम्म पनि आउँदैनन । एक पटक मात्र होइन हरेक पटक यस्तै हुन थालेपछि सचिवालयबाट नै निर्णय गरेर बढीमा १५ मिनेट कुर्ने भनिएको थियो । तोकेको समयभन्दा कम्तिमा १५ मिनेट भन्दा बढी बैठक ढीला नगर्ने भनेका थियौ ।
तर अध्यक्षबाट नै सचिवालयको निर्णय लत्याउने काम भयो । यति सम्म भएको छ कि ३ बजे बोलाएको बैठक ७ बजे सम्म पनि बस्दैन थियो । हामीले सबैले बनाएको नियम हो । म त झन आधा घण्टा पर्खे । कुनै सुचना छैन । बैठक स्थलमा कुनै व्यक्ति छैन । त्यहि सल्लाह गरेर हामी बाहिर निस्केका हौ । विधि र पद्धति बसाल्नलाई नै हामीले त्यो निर्णय गरेका हौ । यसमा धेरै कुराहरु सुर्धानु पर्ने छ । तर पनि नियम र नीतिबद्ध सिद्धान्तवद्ध पार्टी बनाउनु छ । यसकोलागि हामीले नै पहल गर्नु पर्छ । यो ढीलाढालापनका विरुद्ध उभिनु पर्छ भनेर बाहिर आएका हौ ।
घोषणा पत्र लेखेको छ भन्नु भयो तर बाहिर प्रकाशन गर्न केले रोकेको हो ?
केहिले रोकेको छैन । यो नेताहरुको अकमण्र्यताले रोकेको हो । हामीले त सल्लाह सुझाव पनि दिएका छौ । तर त्यो प्रकाशन गदैनन । दस्तावेज हेरेर सकिएको महिनौ भएको छ । अब दुईवटा अध्यक्षलाई हेर्ने जिम्मेवारी दिएका छौ । तर उहाँले फाइनल गर्नु भएन । उहाँहरुले अरु सबै काम गर्न फुर्सद पाउने तर घोषणापत्र नै फाइनल गर्न चाहनु भएनको छैन ।
दस्तावेज नै नभएपछि के हुन्छ । वैचारीक हतियार छैन । सैद्धान्तिक हतियार छैन भने कसरी पार्टीमा एकता हुन्छ । कसरी आसा हुन्छ । कसरी पार्टी एक ढिक्का हुन्छ । हामी त हतियारबिहिन भएका छौ ।
जब कि एमालेले जनताको बहुदलिय जनवाद र माओवादी केन्द्रले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद मान्दै आएका थिए । नेकपाको अबको कार्यदिशा के हो ?
हाम्रो वैचारीक आधार भनेको माक्र्सवाद लेनिनवाद हो । यसमा अब थप्न आवश्यकता पनि छैन । हटाउन पनि आवश्यक छैन । बीच बीचमा विभिन्न पुच्छरहरु जोड्ने काम भए । यसले कति फाइदा बेफाइदा भए त्यो बहसको विषय हो । जसरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुँदा वैचारीक आधार माक्र्सवाद र लेनिनवाद थियो ।
अब पुनः हामी त्यहि बिन्दुमा आएका छौ । अब यसमा कुनै पुच्छर जोड्न आवश्यक छैन । मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद हो । पहिला जोड्दा भएका फाइदा र वेफाइदामाथि बहस गर्ने हो । अब जनवादका दिन सकिए । कुनै आवश्यकता छैन ।
अब नेकपाको पुच्छरमा कुनै नयाँ वाद जोडिदैन भन्नु भएको हो ?
अब जनवादको युग समाप्त भयो । हामीले कहिले नौलो जनवाद भन्यौ । कहिले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौ । कहिले केहि जनताको वाद भन्यौ । अब यो सकियो । अब सबैका युग सकिए । अब समाजवादको युगमा आएका हौ । अब यसको बारेमा सोच्नु पर्छ । यहिलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । यो नयाँ युगको बारेमा सोच्ने हो । यहिलाई अगाडि बढाउन संगठन र विचार अपनाउनु पर्छ ।
त्यसो भए अब नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवादमात्र हुने भयो हो ?
यो सिद्धान्तले विश्वलाई नै प्रभाव पारेको छ । यो विचारमा रहेर कोहि समाजवाद निमार्णमा लागेका छन् । कोहि यहि विचारधाराद्धारा नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा छन् । कसैले क्रान्ति पुरा नगरेको भएपनि पुरा गर्ने योजनामा छन् । यो विचारधारालाई नमान्ने कोेहि छैनन । हामीलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त पनि माक्र्सवाद लेनिनवाद हो ।
तर यतिले पुग्दैन । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता के हुन ?यसमा पनि तत्कालीन आवश्यकता के हुन ? हाम्रो देशको वस्तुस्थितिको कंक्रिट विश्लेषण गरेर अल्पकालीन,दिर्घकालिन कार्यदिशा निर्धारण गर्नु पर्छ । हामीले देश नै पुर्न निमार्ण गर्नु पर्ने छ । हामीले धेरै कार्ययोजना बनाउनु पर्ने छ । यसमा माक्र्सवाद लेनिनवादको आधारमा रहेर नेपालको सन्र्दभमा कार्ययोजना बनाउनु पर्छ ।
नेकपाको विधानमा सहमतिमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । सचिवालयको बैठक त बहुमत र अल्पमतमा पुगिसक्यो ,स्थायी समितिको बैठकमा पनि अब बहुमत र अल्पमतबाट नै निर्णय लागु हुने होला नी होइन ?
हामीले धेरै पहिला देखि नै स्थायी समितिको बैठकको माग गदै आएका थियौ । तर अहिले सम्म बस्न सकेको थिएन । तर केहि दिन पहिला हामी ४ जनाले सचिवालयको बैठक बहिस्कार गर्यौ । त्यसपछि बसेको ५ जनाको सचिवालयले यहि २९ गते स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ । हामीले नै स्थायी समितिको बैठक माग गरेकाले बोलाइएको हो ।
अब बस्ने स्थायी समितिको बैठकले नेकपाको नयाँ बाटो बनाउने छ । यसले केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन गर्ने छ । केन्द्रीय समितिको बैठक बसाल्ने छ । नेकपाको तलका समितिको एकता गर्ने आधार बनाउने छ । पोलिटब्युरो बनाउने आधार बनाउने छ । सकारको समिक्षा गर्ने छ । जनवर्गीय संगठनको एकता बनाउने आधार बनाउने छ । पार्टीको समिक्षा गर्ने छ ।
नेकपाका केहि युवा नेताहरुले यहि नेतृत्वले नै नेपालमा कम्युनिष्ट सक्ने हुन कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् नि ?
मैले यस्तो सुनेको छैन । यसबारेमा म केहि भन्दैन । हामीले सामुहिक रुपमा एउटा नेतामाथि विश्वास गर्ने होइन । हामीले सामुहिक नेतृत्व बनाउनु पर्छ । यो प्रणाली स्थापित गराउनु पर्छ । राजनीतिक,वैचारीक र सांगठनिक रुपमा एकता हुनु पर्छ । एक दुई जना व्यक्तिमा भड्काउ आउन सक्छ । एक दुई जना नेताहरुमा स्खलन आउन सक्छ । तर पार्टी निरन्तर चल्छ । अधपतन आउन सक्छ । तर सिङगो पार्टीमा केहि हुदैन । आन्दोलनमा यस्तो केहि हुदैन । सबै पार्टीलाई सैद्धान्तिक रुपमा ,सांगठनिक रुपमा एकताबद्ध गरेर अगाडि लैजान कटिबद्ध छन् । म कटिबद्ध छु । सबै अग्रगतिको पक्षमा छन् । सुदृढ गरेर अगाडि जान्छ । अहिलेको ढिलासुस्ती स्थायी समितिको बैठकबाट तोडिन्छ ।
सरकारका काम कारबाही प्रति पार्टी भित्रबाट नै आलोचना हुन थालेको छ । यसको कारण के हो सरकारकाले भने जस्तो काम गर्न नसकेको हो कि ?
पहिलो पटक मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकार नौ महिना चलेको थियो । त्यो त बहुमतको पनि थिएन । दुई तिहाइको त कुरा नै छोड्नु होस् । अहिलेको जस्तो राष्ट्रिय परिस्थिति पनि थिएन । अन्तर्रारिष्ट्र परिस्थिति पनि अहिलेको जस्तो थिएन । अनुकुलतापनि थिएन । अल्पमतमा थियौ । तर सरकारले जुनखालका नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । त्यसले नयाँ तरङ ल्यायो । त्यो सरकारले तत्कालीन, अल्पकालीन र दिर्घकालिन योजना तयार गर्र्यो । यसले तीन महिनामा नयाँ उर्जा ल्यायो । त्यसले नयाँ लहर सृजना गर्र्यो । अहिलेपनि सकिन्थ्यो तर सरकारले गर्न सकेन ।
नयाँ लहर ल्याउने गरी काम गर्न सकिन्छन् । तर सुरुबाट नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिचालन जसरी गर्नु पथ्र्यो सरकारले गर्न सकेन । यहि भएर हामी भन्दै छौं चाँडो भन्दा चाँडो सरकारका ,मन्त्रीका काम कारबाहिको समिक्षा हुनु पर्छ । यो समिक्षाबाट कमी कमजोरी पत्ता लगाएर अगाडि जान्छौ । कहाँ गल्ती भएको छ त्यसलाई सच्याएर जान सकिन्छ ।
नेकपामा केपी ओलीलाई छोडेर पनि अन्य तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनु हुन्छ , तर सरकारको आलोचना धेरै भइरहेको छ । तपाईहरु सल्लाह सुझव दिनु हुन्न प्रधानमन्त्रीलाई कि सल्लाह सुझाव नै माग्नु हुन्न ?
यो सरकार अहिलेसम्म एकलकाँटे रुपमा चलेको छ । अहिलेसम्म जति नियुक्ति भए त्यसको पार्टीमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । नीति निर्माण भए त्यसको पनि कुनै छलफल भएन । अहिले पार्टीको सल्लाहमा होइन एक जनाको एकलकाँटे निर्णयमा चलेको छ । मुलुकलाई एकलकाँटे तरिकाले अगाडि बढाउन सकिदैन । कम्युनिस्टहरु भनेका सामुहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छन । यहि हुुनु पर्छ । सामुहिक नेतृत्व भएमा गल्ती कमी कमजोरी पनि कम हुन्छन् । त्यसको जिम्मेवारीपनि सामुहिक नै हुन्छन् । एकलकाँटे शैलीले सरकारको छवि पनि राम्रो हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार एकलौटी रुपमा चलाई राख्नु भएको छ ?
हो,हामी सबैले सामुहिक रुपमा छलफल गरेर सरकार संचालन गर्नु पर्छ भन्छौ । यो माग आम नेता कार्यकर्ताको पनि हो । तर प्रधानमन्त्री एकल रुपमा सरकार संचालन गरीराख्नु भएको छ ।
समृद्धि र समाजवादबीच के फरक छ ?
यो दुँनियामा समाजवाद बिना समृद्धि संभव नै छैन । समाजवाद नै समृद्धिको आधार हो । र आफैमा समृद्धि पनि हो । हामी अहिले विकासको धेरै तल छौ । हामीले उत्पादन शक्तिलाई बढाउदै लैजानु पर्ने छ ।
सिङ्गो मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानु छ । उत्पादक शक्तिको विकास गर्नु पर्छ । उत्पादक शक्तिलाई सक्षम बनाउनु पर्छ । यसको विधि नयाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ । प्राविधिक क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्ति संगसंगै लैजानु पर्छ । हामीले विकासको धेरै तल्लोतहबाट विकास गर्नु पर्ने छ । यो धरातल धेरै तल छ । उत्पादन शक्ति कमजोर छ । समुन्नत बनाउनु पर्छ ।
सहकारीलाई मजबुत बनाउने । राजकिय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने । निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त रुपमा परिचालन गर्नु पर्छ । तीन खम्बे नीतिका लागि गाउँ स्तरबाट नै कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । यसको लागि कार्यक्रम लक्ष्य ल्याउनु पर्छ । यसरी कार्यक्रम ल्याउदै लागु गदै गएपछि समाजवादको आधार तयार हुन्छ ।
अहिलेको नेपाली समाज दलाल पूँजीवाद हो कि पूँजीवादी समाज हो ?
अहिले हामी लामो कालखण्ड पार गरेर सामन्तवादको अन्त्य गरेका छौ । अहिले नेपालमा सामन्तवाद छैन । अब हामी पूँजीवादमा छौ । यसलाई विस्तारै शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाजवादमा जाने हो । यसका लागि धेरै चरण पार गर्नु पर्ने छ । उत्पादन शक्ति,समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार गरेर जाने हो । क्रमस राजकीय क्षेत्र,सहकारी, निजी क्षेत्रलाई परिचाल गरेर समाजवादमा जाने हो ।
यदि तपाईले भनेका यी सबै नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएन भने के हुन्छ ?
यदि हामीले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता,समाजवादमा जाने आधारभूत कुराहरु नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएन भने सरकार फेछौ । हामी रमिता हेरेर बस्दैनौ । यो नेकपाको सरकार हो । यो उपकरण हो । सरकार आवश्यक परे बदल्छौ । मन्त्री आवश्यक परे फेर्छौ । यो सरकारले नेकपा नीति कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्ने उपकरण हो । पार्टी परिवर्तन हुँदैन । तर सरकार त फेरिने कुरा हो । अहिले सम्म कति सरकार बदलिए कति । यो राजकिय उपकरण हो । हाम्रो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लागु भएन भने त्यो सरकार किन चाहियो । फेरिन्छ सरकार ।
यदि अर्को बर्ष पनि सरकार यसरी नै चल्यो भने फेरिन्छ त ?
हामीले आउने आर्थिक बर्षबाट नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने जमर्को गदै छौ । हामी नयाँ तरिकाले चल्छौ । अब यो बर्षको समिक्षा गछौ । अर्को आर्थिक बर्षमा नयाँ आर्थिक नीति कार्यक्रम ल्याउने छौ ।
सरकार परिवर्तन गर्न पनि पार्टीमा बहुमत चाहिने होला । सचिवालयमा चार जना हुनु हुन्छ अध्यक्षको विपक्षमा सरकार परिवर्तन गर्न संभव छ ?
हामी सचिवालयमा जम्मा नै चार जना भएका थियौ । चारका चार जना नै बहिस्कार गरेर हिडेका हौ । अहिले अल्पमत भनेपनि स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकबाट थाहा लाग्ने छ ।
कृष्ण गिरीबाट थप
नेकपाको सचिवालयको बैठक २१ गते बस्ने शुक्रवार, आश्विन १९, २०७५, १४:२२:००
नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै बिहिवार, मंसिर ६, २०७५, १३:२०:००
विदेशी लगानीको नाममा ब्रहमलुट गर्न पाइदैनः मन्त्री यादव निम्बसको खाने तेलको नमुना ल्याएर चेक गर्न सुरु गरेपछि नेताहरुको दबाब मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आएको छ तर हाम्रो मन्त्रालयका कर्मचारी कसैको दबाबको अगाडि झुक्दैनन् । बुधवार, भदौ २०, २०७५, १३:५२:००